Interview with Jawar Mohammed – Pt 2 – SBS Amharic - Bilisummaa
Wednesday , March 5 2014
Posted by: Boonaa Dagaa April 13, 2013
Amarsaa Jawar Mohammed 2013-04-13
About Boonaa Dagaa Previous: Qabsaawaan Ni Kufaa, Qabsoon Itti Fufa!
Next: Ethiopian Muslims staged protest rallies in several cities throughout Ethiopia
OMN News – Oduu : March 4th, 2014 Subscribe to our Channel VIVA…. Obboo Mohamed Adeemoo fii Johar Mohamed..Oromoon isiniin boona Oromo refugee’s performing at the Nairobi University on Refugee Day 20th June.. Oromo refugee's performing at the Nairobi University on Refugee Day 20th June..
gumabaas: Yaada gaarii qabdda. Hawwiin kee illee guddaadha. Garuu har'... Proud Oromo: Ofcourse federalism is the wrong answer to colonialism. But... ali: Yaadannoo bara tokkoffaa du'a Sooreysa Jeeneraal Jaarraa Abb... Gada gamadaa: I have read a short story about a mothers love. 9 I have no... Tolosa Gamachu: It is good to have independent media but the problem with al... Abo
afaan oromoo OMN News – Oduu : March 4th, 2014